10 nke Best Apps maka ego - News Ọchịchị
10 nke Best Apps maka ego
Si ego na nkwari akụ ụlọ na ụgbọelu tiketi ka ụlọ ahịa vouchers, -amụrụ amụọ na gig tiketi na-enweghị ntinye akwụkwọ ụgwọ
Isiokwu a na-akpọ “10 nke kasị mma ngwa ọdịnala n'ihi na ego” e dere site Stuart Dredge, n'ihi na theguardian.com on Friday 5th February 2016 09.00 UTC
All ọṅụ n'eto dị afọ iri na austerity. Ọbụna ma ọ bụrụ na nke na-adịghị agbada ruo oké ọnụ ngwaọrụ anyị na-arụ na anyị dị n'akpa. Ma smartphones nwere ike ịzọpụta gị ego, ọ bụrụ na ị ka ha.
Apps atụnyere ndị ahịa nke nri, ụgbọelu tiketi, insurance na ndị ọzọ na-ọma guzosie ike na ngwa na-echekwa ugbu a, dị ka ndị ngwa ọdịnala na ihe kpọmkwem n'ụzọ nke na-azọpụta gị a ole na ole pound.
ebe a na- 10 ngwa ọdịnala na kwesịrị inyere ahapụ gị obere akpa ka onye obere fatter na njedebe nke ọnwa.
A na-eto eto ọnụ ọgụgụ nke ugboro ndị njem na-ahapụ ya ka e mesịrị na mgbe e mesịrị ka akwụkwọ ha hotels - n'ezie, ka ụbọchị ha na-abata n'obodo a na-. Hotel Tonight bụ otu n'ime ngwa ọdịnala akwali nke a bụ omume: negotiating discounts for ikpeazụ-nkeji ụlọ ntinye akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị obi ike zuru ezu, ị nwere ike akpa ezi amụọ.
British ngwa Dice bụ ụzọ iji na-agagharị na-abịa music concerts na ịzụta tiketi, nke na-echekwara kpam na gị ama. Na o bula gig, kama a nhọrọ a họọrọ ya akụkọ otu, gụnyere ndị ọbịa nke elu-and-abịa na ìgwè ndị agha. The ego na-azọpụta akụkụ: ị na-akwụ dịghị ntinye akwụkwọ ụgwọ mgbe nile.
Skyscanner bụ ihe kasị ike ngwa n'ihi atụnyere ụgbọ elu ahịa: a ngwa ngwa ụzọ enweta na gị chọrọ na-aga ma na-ahụ nke nwere ndị dị ọnụ ala tiketi. Ngwa ahụ na-ị na-ahụ mkpa saịtị ka akwụkwọ gị flights, kpọbata mfe, irè nzacha na obụpde ya ruo ihe kasị mkpa nhọrọ.
Nke a na-eji ngwa bụ otu n'ihi na foodies, dị ihe karịrị 7,000 ụlọ oriri na ọṅụṅụ gburugburu UK gụnyere ígwè dị ka Pizza Express na Zizzi. Ọ na-eme gị ruo ụbọchị na ego na n'ọkwá, nakwa dị ka na-enyere ị na-ahụ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-kacha gị nso ugbu a ebe, na akwụkwọ a table si eji ngwa.
Naanị ụmụ akwụkwọ na UK mkpa ibudata a na ngwa, nke aggregates dị iche iche discounts negotiated site na-amụrụ n'otu na NUS. Ọ na-nwere ebe ndị dabeere na atụmatụ, na a map na-egosi dị nso na-enye. Ya search mma bụ na-eru ya ngwa ngwa, enyere gị aka ịchọta ụzọ site n'aka ihe karịrị 150 mmekọ 'discounts.
mySupermarket bụ ihe dị a shopping-ndepụta ngwa dị ka otu ụzọ na-ego: ị nwere ike iji ya tinye na ngwaahịa ị chọrọ ịzụta ofụri izu, mgbe ahụ nne Mmetụta ha dị ka ị na-eje ije site na aisles. Ma ngwa na-emekwa ka na taabụ na ahịa n'oge dị iche iche UK Ahịa, enyere gị tụnyere ahịa na-ahụ ọhụrụ amụọ dị ka ha na-aga ndụ.
Unu tagzi-hailing ngwa ọdịnala dị ka über azọpụta gị ego? Mgbe ụfọdụ,, ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe aha ọjọọ "anya" ịnye ọnụahịa bụ a pụrụ isi kwuo. Minicabit-ewe a dị iche iche obibia: ọ bụ a tụnyere ngwa n'ihi na tagzi na Obere-tagzi ụlọ ọrụ n'ofe UK, na-ị na-enweta na nkọwa nke gị na njem, mgbe ahụ-agagharị ruturu si dị iche iche obodo ahụ na ụlọ ọrụ. Ọ ugbu a na-arụ ọrụ 40 UK obodo.
-Arụsi ọrụ ike na-a zuru ezu jide on your ọkụ eletrik na gas ego? Jikọọ ụlọ ọgbakọ. Meter Agụ bụ kemgwucha bara uru ngwá ọrụ maka kpọmkwem na, na ọtụtụ mara mma grafụ nsuso gị ụgha, na-akwụ ụgwọ. Ma ọ bụ ndị price tụnyere atụmatụ nke pụrụ ịzọpụta gị ego: achọpụta ihe ndị ọzọ na enye '-akwụ ụgwọ nọ n'ógbè gị na-enweghị a salesperson n'ime anya.
Computers kama smartphones nwere ike ịbụ họọrọ ụzọ nyochaa mkpuchi ụgbọ ala ahịa. MoneySuperMarket si MoreMoney ngwa na-enwe olileanya iji nwaa a ole na ole ndị mmadụ na-aga mobile ezie na: ọ bụ a ngwa ngwa, mfe ụzọ iji nweta atụmatụ maka ụgbọ ala na n'ụlọ mkpuchi, ndị ọzọ ọrụ njikwa ego.
Siwing a cat na ngwa na-echekwa, na ị ga-kụrụ a osisi iri na ego na-azọpụta ndepụta ego ngwa ọdịnala: Wowcher, HotUKDeals, Vouchercloud na ndị ọzọ niile bụ ndị bara uru a anya n'ihi na kwe ọnụ ahịa dinta. VoucherCodes bụ otu n'ime ndị kasị keukwu, na a mix nke shopping, eri ihe, na njem discounts, nakwa dị ka atụmatụ iji ịnọ na mpaghara amụọ.
Gịnị ka anyị Agbaghara? Ihe ngalaba bụ oghe maka gị ịkọrọ gị ahụmahụ nke ngwa ahụ e depụtara n'elu, na nwere ikwu maka ego na-azọpụta ngwa ọdịnala na anyị gụnyere.
← Fentanyl: ọgwụ 50 Times More nke nwere ike Than heroin Apple Na-ekwu iPhone 'Error 53′ bụ Chebe Ahịa’ Security →